ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ Rohingyar Crisis (အပိုင်း ၁) [Nyein Chan Aye] | MoeMaKa Burmese News & Media
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အကြပ်အတည်း နှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းအရာ အခြေအနေများ အပေါ် ကိုယ်ပိုင် အမြင် နဲ့ အကြံပြုချက်များ – ဆွေးနွေးတင်ပြသူ – ငြိမ်းချမ်းအေး
(Personal Views and Recommendations on Rohingyar Crisis and Other Related Matters by Nyein Chan Aye)
နောက်ခံ အခြေအနေ (Background)
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်တော့ ဒီ စာဖတ်ဖြစ်သူအားလုံး မျက်ခုံးတွေ ပင့်သွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေကို ပထမဦးဆုံး သိစေချင်တာကတော့ စာရေးသူဟာ အရင် စစ်အစိုးရ ခေတ် ကတည်းက ဒီလို အွန်လိုင်းမှာ မိမိ အမြင်တွေ တင်ပြ ဖလှယ်လေ့ရှိပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ရှေ့တန်းတင် ဦးတိုက်ပြီး ပြောလေ့ မရှိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတာပါ။ အကြောင်းက စစ်အစိုးရခေတ်တလျှောက်လုံး မှာ လူများစု မြန်မာ အပါအဝင် အခြား လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ၊ လူမျိုးကွဲ/ဘာသာခြား နိုင်ငံသားအားလုံးဟာ ဖိနှိမှု၊ မတရားမှုတွေရဲ့ ဒဏ်ကို စစ်ဖိနပ် အောက်မှာ ပြားပြားဝပ် အားလုံး တန်းတူ ခံစားနေရလို့ အုပ်စု တစုကို အခြေပြုတဲ့ ဘယ်သူ့ အကြောင်းမှ သီးသန့် အလေးထား ပြောဖို့မလို၊ စနစ်ဆိုးအကြောင်းသာ ထောက်ပြဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လူမျိုးကွဲ/ဘာသာခြား တွေ ဟာ နယ်စပ်ဒေသတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ နယ်မြေတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ပို ခံကောင်း ခံ ရတယ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် တုန်းအောက်က ဖားချင်း အတူတူချည်းပဲလို့ ယူဆတဲ့ အတွက် ယေဘုယျ သဘောဆောင်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုပဲ အရင်တုန်းက ပြောလေ့ ဆွေးနွေးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခု ခေတ်စနစ် ပြောင်းပြီလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့လည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို စပြောဖို့ ဆိုဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ အကြောင်းက စာရေးသူ တဦးတည်း သဘော နိုင်ငံရေး ခံယူချက် အမြင် အရ အခြေခံကျကျ ခေတ်ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ မယုံကြည်လို့ရယ်၊ အပေါ်ယံ ခေတ်ပြောင်းပြီ ဆိုစေအုံး.. စနစ်ဆိုး၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ ပြောင်းဖို့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အပါအဝင် လူတန်းစား အသီးသီး နဲ့ သာမန် ပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆဟောင်းတွေ ပြောင်းဖို့က အချိန်ယူရအုံးမယ်ဆိုတာ နားလည်လို့ရယ်၊ တကယ်လို့ ခု စ ပြောစရာရှိရင် ရိုဟင်ဂျာတွေ နည်းတူ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ နဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ နိုင်ငံမဲ့ ဒုက္ခသည် အနေနဲ့ ရောက်နေတဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စ ဖြေရှင်းဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်းသာ အရင်ပြော ဖို့လိုပြီး သူတို့တတွေ အများစု သူတို့ မြေပြန်နင်းခွင့်ရပြီးမှ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို ပြောသင့်၊ ဖြေရှင်းသင့်၊ ပြောနိုင်၊ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ စာရေးသူတဦးတည်း အမြင်အရ ယူဆလို့ရယ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေထဲက နောက်ဆုံးအချက်ကို ဖတ်ရတော့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ နဲ့ သူတို့ကို စာနာသူ၊ ထောက်ခံသူတွေက ဒီစာရေးသူက ဘက်လိုက်တယ်လို့လည်း မမြင်စေချင်ပါ။ သမိုင်း ဖြစ်စဉ် နဲ့ လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေအရ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ က ဖြေရှင်းဖို့ ပို သိမ်မွေ့ ခက်ခဲလို့ ဒီလို ယူဆခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်တုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်က လူတဦးချင်းသဘောနဲ့ ကျူးလွန်းခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှု ကနေဆက်စပ်လို့ နောက်ပိုင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်လာပြီး အကြမ်းဖက်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု တွေ ဆက်ဖြစ်ကာ အဓိကရုဏ်း ပုံစံ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဒေသတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ [စကားချပ် – အဲဒီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ဖြစ်ခါစမှာ အကြောင်း/အကျိုး ရှာတဲ့ စာရေးသူရဲ့ အမြင်ကို “ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆင်ခြင်စရာ”၊ မိုးမခ (ညွှန်း-၁) ဆိုပြီ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။]
ဒီလို အနေအထားနဲ့ အတူ မိမိတို့ ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကိုးကွယ်မှု ဘာသာတူ တိုင်းရင်းသား ရခိုင် တွေကို စာနာသူ၊ ဘင်္ဂါလီ အနွယ် ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို စာနာတဲ့ သူတို့နဲ့ဘာသာတူ ဗမာပြည်ဖွား၊ နိုင်ငံသား ဘာသာကွဲတွေ စတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက လူတွေ၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဖြစ်စဉ် သတင်း အချက်အလက် အမှန်ကိုသာ ကိုယ်ပိုင် အာဘော် မပါ အတိအကျ အစွဲကင်းကင်း ဖော်ပြပြီး သူကြီး အလုပ်၊ တရားသူကြီး အလုပ် ဝင်မလုပ်ဘဲ နေရမယ့် မီဒီယာတွေ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ/နိုင်ငံပိုင်) နဲ့ ပြဿနာကို အလျင်အမြန် ထင်သာမြင်သာ ရှိရှိ ဖြေရှင်းရမယ့် ဒေသခံ ပြည်နယ် အစိုးရ နဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကြားဝင် ဖြေရှင်း စေ့စပ်ဖို့ ကြိုးစားရမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ စတဲ့ အစုအဖွဲ့ အသီးသီးက တုန့်ပြန်ပုံတွေမှားယွင်း၊ အရေးယူပုံတွေ နောက်ကျ၊ သဘောထားတွေ မမှန်ကန်၊ ဘာသာ/လူမျိုး အခြေခံစိတ်တွေ ထား စတဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှု နဲ့ သဘောတွေ ကြောင့် လူမျိုးရေး/ဘာသာ ကွဲတွေအကြား အမြင်မကြည်လင်မှု နဲ့ အမုန်းတွေဟာ ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကို အရင်ကထက် ပို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီသဘော နဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ တိုင်းပြည် နယ်နမိတ် ကိုပါ ကျော်ဖြတ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာပါ ထင်ရှားလာခြင်းနဲ့အတူ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသေးတဲ့ မိမိလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် သတင်းတွေ၊ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အမျိုးမျိုး ချဲ့ထွင် ပုံဖျက်ခံရကာ စွပ်စွဲမှု အကြီးကြီးတွေ ထိ ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို ပြည်တွင်း ပကတိ အခြေအနေ အခြေပြုကာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီအောင် စဉ်းစား စီစဉ်ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အားလုံး အလုံးစုံ ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ ခု ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တခု ပြန်လည် တည်ထောင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေ့ အနာဂတ် လမ်းမှာ လုပ်ရမယ့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တော့မယ့် အခြေအနေ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တခုက မိမိ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ သိုသိုဝှက်ဝှက် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းတဲ့ စရိုက် အရိုးစွဲနေမှုသဘောက ချဲ့ကား လုပ်ကြံ ပြောဆိုခံရမှုတွေ နဲ့ အတူ အကျိုးဆက် ရင်ဆိုင်ရလာနိုင်တဲ့ (ခုအချိန်မှာ ခြိမ်းခြောက်မှု အနေနဲ့က စရှိနေပါပြီ) အကြမ်းဖက်ခံရမှု အခြေအနေက နိုင်ငံ ရဲ့ တိုးတက် စည်ပင်သာယာဝပြောရေး နဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံး ရဲ့ လုံခြုံရေးကို တကယ် ထိခိုက်နိုင်မယ့် အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတာဝန် ယူပေးရတဲ့ သူတွေမှာ ခေတ်မီ ကောင်းမွန် ပြည့်စုံတဲ့ စနစ်၊ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးမှု အားနည်းခြင်း နဲ့ အတူ ဘယ်အရာမဆို ပြီးပြီးရော အလွယ် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟောင်း မပျောက်သေးတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ ဒီလို အနေအထားဟာ ခြိမ်းခြောက်မှု သက်သက်ဆိုစေအုံးတော့. အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်၊ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် တကယ်ပဲ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမှ တကယ် ခု တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ရှုမြင် သုံးနှုံးနေတဲ့ အမျိုးသား လုံခြုံရေး (National Security) ပြဿနာ အစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံအနေအထားတွေကြောင့် စာရေးသူလည်း ဘယ်လို အသံမျိုး၊ လွှမ်းမိုးအရာရောက်မှုမျိုးမှ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်စွမ်း သူ မဟုတ်တဲ့ သာမန်လေ့လာသူ လူငယ် တယောက်ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ နဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဝင်ရောက် ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ နောက်အကြောင်းတခုက ဆိုခဲ့သလို ဒီပြဿနာကို တခါမှ ဆောင်းပါးရှည် အနေနဲ့ အကျယ်တဝင့် မပြောခဲ့ဖူးဘူးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ဒီ ရခိုင် မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်စဉ် အစကို သုံးသပ်ခဲ့တဲ့ “ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆင်ခြင်စရာ” ဆောင်းပါး နောက်မှာ စာရေးသူရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အမြင် ကို ကိုယ်ပိုင် လူမှုကွယ်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာတို အနေနဲ့ တခါ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရေးခဲ့တဲ့ စာတိုပါ သဘော နဲ့ အခု ဆောင်းပါးမှာ ရေးမယ့် အချက် တွေဟာ အတူတူ ပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ စာတို ပါ သဘော ထား အတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို အမှန်အတိုင်း အသုံးချပြီး လက်ရှိ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေထဲက နိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်သူတွေကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးပြီး ဖြေရှင်းမှ ဒီပြဿနာ ကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို လက်ခံ နားလည်မှု ရှိလာတဲ့ သဘော လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ အကြီးအကဲ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကိုယ်တိုင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ အခု အချိန်မှာ ဒီအကြောင်းရဲ့ နောက်ခံ အခြေအနေကို နည်းနည်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးတဲ့ ဆောင်းပါး ပုံစံ အသစ် ရေးလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရူပါ။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး နာမည် အခေါ်အဝေါ် အငြင်းပွားမှု (Rohingyar: Naming Controversial)
ရခိုင် နဲ့ မြန်မာ သမိုင်းပညာရှင် တချို့ နဲ့ ရခိုင်၊ မြန်မာ အများစုက ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် နဲ့ အသုံးအနှုန်း ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာပြည် ခေတ်ဦး ရောက်မှ နိုင်ငံရေး လိုအပ်ချက်အရ တည်ထွင် ဖန်တီး သုံးစွဲ ခဲ့ကြတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သဘော မဆောင်ဘဲ ဘာသာဗေဒ သဘောအရ ဒီဝေါဟာရ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ကို ရခိုင်/ မြန်မာ – ရိုဟင်ဂျာ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးလည်း လက်ခံနိုင်မယ့် ရှေးကွင်းဆက် ပြောရမယ်ဆိုရင် (၁၈) ရာစု နှောင်းပိုင်း (၁၇၉၉) ခုနှစ်မှာ အခု အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသ ပတ်ဝန်ကျင် ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယ မှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး စစ်တကောင်း ဒေသ နဲ့ ရခိုင် ဒေသတွေကို သွားလာလေ့လာခဲ့တဲ့ အဲ့ခေတ်က ခေတ်ပြိုင် ပုဂ္ဂိုလ် လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ စကော့လူမျိုး ဆရာဝန် Dr. Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829) ရေးသားခဲ့တဲ့ “မြန်မာ (ဗမာ) လက်နက် အင်ပါယာ နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ ဘာသာစကား အပြော တချို့ရဲ့ ဝေါဟာရ အသုံးများ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်“ ဆောင်းပါးမှာ ရခိုင်ဒေသ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မဟာမေဒင် ဘာသာ ကိုးကွယ် တဲ့ ရိုအင်ဂျာ (Rooinga) လူမျိုးတွေရဲ့ စကားကိုလည်း ဒေသသုံး စကား (Dialect) အနေ နဲ့ ထည့်သွင်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အချက်ကိုလည်း ယနေ့ခေတ်ပြိုင် ပြင်သစ် လူမျိုး ရခိုင် သမိုင်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် Dr. Jacques P. Leider က ဘာသာဗေဒ သဘောအရ ခု တွေ့ရှိ့ရသေးသမျှ ထဲက အစောဆုံး တွေ့ရှိချက် လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ သူဟာ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို ဌာနေတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးလို့ သူ့အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ထားသူ တယောက်ဆိုတာလည်း သတိပြုပါ။ ဘာသာဗေဒ စကားလုံး ဝေါဟာရ တွေ ရဲ့ ရင်းမြစ် နဲ့ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု (Etymology) သဘော အရ (၁၈) ရာစု ထက် ရှေးကျတယ် ဆိုတဲ့ အခြား ကောက်ချက် ဆွဲ သူ ပညာရှင် တွေရဲ့ အမြင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူဟာ ဒီစာကို အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ရေးတာမဟုတ်ဘဲ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကိုပဲ ဆိုချင်တဲ့ အတွက် အကျယ်ထည့်မရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံ အခြေအနေ မှာ စာရေးသူ အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ စကားလုံး ပေါ်ခဲ့တယ်၊ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ခဲ့တယ်/မခေါ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ မငြင်းဘဲ လူမျိုးတွေရဲ့ မွေးရာပါ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် အဘောအရ သူတို့ လူမျိုးတွေ အများစု ကျေနပ်လို့ သူတို့ဘာသာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်းကို လက်ခံပါတယ်။ အများကလည်း သူတို့ကို ညွှန်းဆိုရင် သူတို့ခေါ်စေဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နာမည် အတိုင်းပဲ အသုံးပြုရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခြား လူမျိုး တမျိုးမျိုးရဲ့ နာမည် နဲ့ မတူတဲ့ အခြား သူတို့ ကြိုက်တဲ့ နာမည် အသစ် တခုခုကို သူတို့ လူမျိုး ဆန္ဒအရ ခုမှ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရသေးတယ် လို့ ယူဆပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဟာ ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားလား (Is RohingyaraNative Ethnic Group of Burma?)
ဗမာနိုင်ငံသမိုင်းကို အခြေခံ အဆင့် လေ့လာဖူးသူဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဟာ အပြည့်အဝ နိုင်ငံသားတွေအဆင့်သာမက ဌာနေ တိုင်းရင်းသားပါ အသတ်မှတ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတယ်ကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး အထောက်အထားပြရရင် စာပေဗိမာန် ၁၉၆၄ ပဌမအကြိမ်ထုတ် မြန်မာ့စွဲစုံကျမ်း အတွဲ (၉)၊ အပိုင်း (က)၊ စာမျက်နှာ (၈၉) ပါ “မေယုနယ်ခြားခရိုင်” ခေါင်းစဉ် အောက်က ရခိုင်ပြည်နယ် မယူတောင်တန်းကို ဗဟိုပြုတဲ့ မယူမြစ် နဲ့ နတ်မြစ်ကြား ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များမှာ နေထိုင်တဲ့ လူအများစု (၇၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ နဲ့ အခြား ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမွီး တိုင်းရင်းသားတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံသမိုင်း နဲ့ အခြေအနေ မှာ ဗမာ့သမိုင်းကို အခြေခံထက်ပို လေ့လာဖူးတယ် တယ်လို့ ဆိုချင်ရင် ရတဲ့ စာရေးသူ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား တွေပါလို ဘယ်တုန်းကမှ မဆိုခဲ့၊ မမြင်ခဲ့၊ မပြောခဲ့သလို အခုဆောင်းပါ အပါအဝင် နောင်လည်း.. ပြောမှာ ရေးမှာ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရမှု ဖြစ်စဉ် နဲ့ အကြောင်း သဘောကို လက်မခံလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ် ရောက်မှ နိုင်ငံရေး လိုအပ်ချက် သဘောအရ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု တချို့ကိုလည်း အလုံးစုံ သဘော အနေနဲ့ လက်ခံလို့ မရပါ။ ငြင်းလည်း မငြင်းပါ။ သူတို့ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် စာရေးသူ အနေနဲ့ မပြောဘူး/ မငြင်းဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့် ဆိုတာကို နောက်အကြောင်းတခုပြရရင်…
လူတွေဟာ သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်တွေမှာ ကမ္ဘာ အနှံ့ ဆိုသလို ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာဖွေရင်းနဲ့ လှည့်လည်၊ သွားလာလေ့ရှိပြီး သင့်လျော်ရာ နေရာ၊ ဒေသ နဲ့ ဥတု မှာ သင့်လျော်သလို နေထိုင် အခြေချ လေ့ရှိကြပါတယ်။ လူမျိုးစု တစုကို လက်ရှိ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံရယ်လို့ ခေါ်ဆို သတ်မှတ်ကြတဲ့ နေရာတနေရာအတွက် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် သတ်မှတ်ရာမှာ အခြား သိပ္ပံနည်းကျ ဘာသာဗေဒ၊ မနုဿဗေဒ စတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုံးသပ် ကောက်ချက်ဆွဲမှု များနဲ့ အတူ အဓိက က သမိုင်း ဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်း အနေနဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံတည်ရှိတဲ့ နေရာဒေသ၊ နယ်နမိတ်အတွင်းကို သမိုင်းမတင်မီ (သို့) သမိုင်းတင်စ အခြေအနေက စလို့ နောက်ပိုင်း ဘယ်အချိန် အစောဆုံး အဲ့လူမျိုးစု အများစု ဝင်ရောက် အခြေချ နေထိုင်ကြ (Mass Migration/Settlement) သလဲဆိုတာကို ကြည့်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာ အပါအဝင် အခြား လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ လူအများစု နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံထားတဲ့ လူမျိုးစုတွေလည်း ဒီလို လှည့်လည်သွားလာ နေထိုင်ခဲ့ကြရင်းနဲ့ပဲ ဗမာ့ သမိုင်းမတင်မီ နဲ့ တင်ပြီးစ ခေတ်တွေမှာ လက်ရှိ ဗမာ နိုင်ငံလို့ ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်တဲ့ ဧရိယာ အတွင်းကို ဝင်ရောက် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒီလို စတင် အခြေချနေထိုင်တဲ့ အချိန် သတ်မှတ်ကြရမှာလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ မြေထဲသမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေအရ ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ် အတိအကျ ပြောဆိုနိုင်မှု အားနည်းပြီး အမျိုးမျိုးယူဆနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို သဘောအတိုင်းပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်အချိန်တုန်းကတည်းက ခုလက်ရှိ သူတို့နေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင် နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားဒေသမှာ လာရောက် အခြေချနေကြသလဲဆိုတာဟာလည်း သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်အနေနဲ့ ဘက်နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အခြေအနေ ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ အမြင်နဲ့ သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသား တကယ် ဟုတ်/မဟုတ်လည်း သုံးသပ်လိုစိတ် မရှိပါ။ သုံးသပ်လိုစိတ် မရှိတာထက် သုံးသပ်နိုင်ခွင့်မရှိတာဆိုရင်ပိုမှန်ပါမယ်။ စာရေးသူ တယောက်တည်း အမြင်၊ သဘောထားနဲ့ သုံးသပ်ပြောဆို၊ ဟုတ်/မဟုတ် ရေးသားပြောဆိုရင်လည်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်လာတာသာ အဖတ်တင်ပြီး ဘာမှ လက်ရှိ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ပြုမှာ မဟုတ်ပါ။
သူတို့ကို ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အလုပ်ကို စာရေးသူ အမြင် တခုတည်းနဲ့ သုံးသပ်လို့ မရသလို အခြား ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဦး၊ ပညာရှင် တယောက် ယောက်၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း တခုခု နဲ့ အစိုးရ အပါအဝင် တဦးချင်း၊ တဖွဲ့ချင်း သဘော ဘယ်သူမှလည်း လုပ်ဆောင်၊ ပြောဆို၊ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ဥပဒေပြု လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရက ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဖြစ်မှု ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးရမှာ မှန်ပေမယ့် ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချနိုင်ဖို့က ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက လက်ခံနိုင်တဲ့ လွတ်လပ် ဘက်မလိုက်တဲ့ ဘာသာဗေဒ၊ မနုဿဗေဒ၊ သမိုင်း၊ ရှေးဟောင်း မြေထဲသမိုင်း ပညာရှင် စတဲ့ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ အမြင်တခုတည်း အပေါ်သာ အခြေခံတဲ့ ပညာရှင်တွေ စုစည်းထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လေ့လာစုံစမ်းရေး အဖွဲ့က သုံးသပ်လေ့လာပြီး အကြံပြုချက် တရပ်ကို လူထု နဲ့ အစိုးရထံကို တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဂတိ ကင်းတဲ့ သုံးသပ်ချက် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် လိုအပ်ရင် အများစု လူထု သဘောထားဆန္ဒခံကာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စ ဗမာပြည် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရခေတ်၊ နောက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ နဲ့ မဆလ ခေတ်ဦးပိုင်းတွေမှာ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု နဲ့ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ်မှာ အသိမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ တခြား တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ကို စာရေးသူ လက်မခံဘူး၊ သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေပါလို့ ခုလည်း မပြောဘူး၊ ငြင်းလည်း မငြင်းဘူးဆိုတာက ခု စာရေးသူ တင်ပြခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သဘော၊ အလုပ် နဲ့ ဖြစ်စဉ် အဲဒီ အချိန်တုန်းက အားနည်းခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ အနေအထားမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ်ကို လက်ရှိ အချိန်မှာ အငြင်းမပွားကြဖို့ ရခိုင်၊ မြန်မာ၊ ရိုဟင်ဂျာ ပညာရှင် နဲ့ သာမန် လူထု ကို စာရေးသူအနေနဲ့ အကြံပြု တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီလိုအငြင်းပွားမှု ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်သလဲဆိုတာက စာရေးသူ တဦးတည်း ဘာကြောင့် မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ အငြင်းမပွားနိုင်၊ အငြင်းပွားခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိလို့ပါလို့ အကြောင်းပြ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သဘောတရား အတိုင်းပဲ ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကို တဘက်သတ် ဥပဒေ အရ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ တဘက်က အရင်ကတည်းက ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတွေပါ ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ဇောင်းပေးပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးလိုတဲ့ အဝေးရောက် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရှင် ဆိုသူများနဲ့ ပြန်လည် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေတဲ့ ရခိုင်၊ မြန်မာ ပညာရှင် များကို စာရေးသူ အနေနဲ့ အနူးအညွတ် မေတ္တာ ရပ်ခံ အသိကပ်စေလိုတာကတော့ ဒီလို တိုင်းရင်းသာ ဟုတ်/မဟုတ် အခုအချိန်မှာ အငြင်းပွားနေလို့ ပြဿနာ က ပြီးမှာ မဟုတ်တဲ့ အပြင် ငြင်းနေတုန်းကာလမှာပဲ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ပုံစံတွေ ထပ်ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးရမှာက အခု စာရေးနေသူ စာရေးသူ၊ အခု စာဖတ်နေသူ အများစု အပါအဝင် အငြင်းပွားနေသူ ပညာ ရှင်များမဟုတ်ဘဲ တကယ် ပဋိပက္ခ ဒေသမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင် နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြည်သူလူထုတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ (ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)
(မိုးမခက ဘာလို့ ဒါတွေ ဖော်ပြနေတာလဲ။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ဒါကို လက်ကိုင်ပြုပြီး မိမိရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အကျိုးစီးပွားတွေကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို စာဖတ်သူတွေ မြင်သာထင်ရှားစေဖို့ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်)
ဓာတ်ပုံ အညွှန်း နဲ့ Credit က “ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်း ရဲ့ “’ဒီက ဒို့ဘယ်သွားကြမလဲ” စာအုပ် မှ ယူသည်။ (အီးဘွတ်ခ် ကို Burmese Classic အွန်လိုင်းစာမျက်နှာက ပြန်လည် မျှဝေသည်။)”
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အခန်းဆက်များ, ဝေဖန်ရေးရာ	7 Responses to ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ Rohingyar Crisis (အပိုင်း ၁) [Nyein Chan Aye] Pyi Chit Myo Chit on August 22, 2012 at 2:39 pm Francis Buchanan-Hamilton’s book about ‘Rooinga, or natives of Arakan’ is available online.
For the purpose of confirming or dismissing the link between ‘Rooinga’ of 18th Century and so-called ‘Rohingya’ of 20th to 21st centuries (If it is essential), we need further research to establish whether ‘Rohingyas’ of modern days are actual descendants of the the people who spoke ‘Rooinga’ in 18th Century Arakan. Detailed linguistic studies may help in addition to other lines of investigations. For example, most Myanmars believe the so-called ‘Rohingyas’ are Bengalis as they speak Bengali and look like Bengali. The linguistic experts can find out if ‘Rooinga’ language used in 18th century was related to modern day Bengalis? It is possible (just assumption) that the people who spoke ‘Rooinga’ in 18th century could have become extinct just like some minority ethnic races over time, but the name was adopted, re-invented or reincarnated by the ‘clever’ Bengali immigrants and Mujahids in 1950-60s under U Nu Government. The official Census records of the colonial British Government and Myanmar Government ‘DID NOT’ mention neither ‘Rooinga’ nor ‘Rohingya.’ If they are real descendants of ‘Rooinga’, the modern days ‘Rohingyas’ should also be able to produce substantial historic and cultural evidences to counteract criticism of others who believe that they can’t recount their history or show usual historic evidence ofarace at all.
Min Htet Thar on August 22, 2012 at 4:24 pm ဒီဆောင်းပါးရှင်ရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာ သမာသမတ်ကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်…ဆက်ပြီးရေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..
မူဟာမတ်တော်ယုတ်(ခ) မော်ကျော်ဝင်း on August 22, 2012 at 6:57 pm ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ)တွေက ဦးနုလက်ထက်တုန်းက လုပ်ကွက်တွေပါ… ဘယ်တုန်းကမှ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူး… ဘင်္ဂါလီလူလိမ်တွေနဲ့ ဦးနုပူးပေါင်းပြီးတော့ သမိုင်းလိမ်တွေပါ…။ နိုင်ငံရေးလုပ်စားကွက်တွေပေါ့နော်… လူလိမ်ဆောင်းပါးရှင်…ပါ..ဒီဆောင်းပါးရှင်ကလည်း လူလိမ်လို့သာမြင်ပါတယ်… ထပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတာပါ…
ကိုကိုအောင် on August 22, 2012 at 7:03 pm ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စာလုံးကိုမြင်လိုက်ရတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီးကို သွားသတိရမိတယ်…. ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေပါ… ဘာသာရေးနယ်ပယ်ချဲ့ထွင်နေသူတွေပါ… မူဆလင်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာစေရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးကိုခုတုန်းလုပ်ပြီး လိမ်လည်နေသူတွေပါ…။ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေက နိုင်ငံခြားသားစစ်တွေပါ… အထက်မှာပြောသလိုမျိုးလူလိမ်တွေပါ..
ဆရာမိုးဇော် on August 22, 2012 at 7:10 pm ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေက သူတို့က ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနိုင်ငံကနေ ခိုးဝင်လာခဲ့ကြသူတွေပါ.. သူတို့က ဘယ်လိုလုပ် တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှာလည်း…. အဓိပါယ်မှမရှိတာ…. ဒီကောင်တွေလုပ်လို့ ကျူပ်တို့မြန်မာမူဆလင်တွေကိုပါ.. ရောပြီး အထင်ခံနေရပြီ…ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တောဘက်မှာရှိတဲ့မူဆလင်တွေက နိုင်ငံခြားသားတွေပါ….။
horus on August 24, 2012 at 11:32 pm ခေါင်းစဉ်က ကို ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးမတပ်ပါနဲ့။ ဘင်္ဂါလီကုလားဆိုတာ ဘင်္ဂါလီ လို့ ပဲ ခေါ်ပါ။
AM on August 25, 2012 at 5:21 am ငြိမ်းချမ်းအေးဆိုတဲ့ ပုပ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ကိုးကားစာအုပ်တွေက လိုရာဆွဲပြီး ကလောင်တစ်ခြမ်းနဲ့ရမ်းလိုက်တာ စာဖတ်ပရိတ်တော့ အူလည်လည်ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါ့။ လိုရာဆွဲကျမ်းကိုးတွေနဲ့ သူ့စာဖတ်ရတာ ၀င်းဦးရဲ့နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးကို ထမီကြားမှာ အထင်းသားတွေ့သလို သဘောပေါက်ကြသူတွေလဲ ရှိပေမပေါ့။ သူ့စာထဲမှာတော့ ဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက ဟိုဟာဒီဟာတွေ လုပ်သင့်တယ်၊ ဟိုလိုဒီလိုသဘောထားသင့်တယ်နဲ့ ၊ နောက်ကွယ်က အကြံအစည်တွေကို မသိတာလား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလားဆိုတာ ကျုပ်တို့လူသာမန်တွေ လိုက်လို့ဘဲ မမီနိုင်ဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ တပြွတ်ပြွတ်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဦးရေတွေ၊ လစ်ရင်လစ်သလိုတစ်မျိုး၊ တံစိုးပဏ္ဏာနဲ့တစ်ဖ၊ုံ ခြိမ်းခြောက်ဥပါယ်နဲ့တစ်နည်း ခြံကျော်ခုန်ပေါက် အုပ်လိုက်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ သူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ စုပေါင်းထုထောင်းလိုက်ကြလို့ ရခိုင်ပြည်သူတွေ မြောက်ပိုင်းနယ်ပျောက် တောင်ပိုင်းရောက်နေကြရပြီ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာလည်း သူတို့ဇာတ်တူနွယ်တူတွေက အကြမ်းဖက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သူတို့လူတွေကို သတ်ဖြတ်နေ ပါတယ်လို့ သူခိုးကလူဟစ် ၀ါဒဖြန့် ပြီး ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို ဖန်တီးနေကြပြန်သေးတယ်။ အထက်ကဆောင်းပါးရှည် ရွှေပြည်အေးယောင်ယောင် ဝါဒဖြန့်မှိုင်းကို ပေါ့ပေါ့ဆဆဖတ်ပြီး နားယောင်မိရင်တော့ အရင်တစ်ခါလို ရေပိုင်နက်သာမက မြေပိုင်နက်ပါဆုံးဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ အဲဒီလိုဆုံးရှုံးရရင်လည်း အထက်ကဆောင်းပါးရှင်ကြီးကတော့ အရင်တစ်ခါရေပိုင်နက်ဆုံးရှုံးစဉ်ကလို ရခိုင်တွေပိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်း၊ ရခိုင်တွေပိုင်ခဲ့တဲ့ရေ၊ ရခိုင်တွေပိုင်ခဲ့တဲ့မြေ ဆုံးရှုံးလို့ ခင်ဗျားတို့ ဘင်္ဂလားကို ပေးလိုက်ရလေခြင်းလို့ ကြိတ်မနိုင်၊ ခဲမရဖြစ်နေရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား ဆိုတာ ဝေဖန်၊ သုံးသပ်၊ စဉ်းစား စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်တွန်းချက်တွေနဲ့ ပြည်သူကို အကြောင်ရိုက် သွေးခွဲပြီး သူ့ဆွေသူ့မျိုးတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်နေမှာမလွဲပါဘူး။ အချို့ကလည်း ထိုဆောင်းပါးရှင်ကြီး မျှတပါရဲ့လို့ မသိနိုးနား ကောက်ချက်ချသွားပါရဲ့။ တကယ်သာ သမာသမတ်ရှိရင်တော့ ရွှေပြည်အေးယောင်ယောင် ဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်စရာလဲမလို၊ ရခိုင်နဲ့ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလဲ အကြောင်ရိုက် သွေးခွဲစရာမလို၊ ရခိုင်အနောက်မြောက်ပိုင်းက သူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့က ကျီးအာသလို ၀ိုင်းအာနေတဲ့ သူ့ဇာတ်တူနွယ်တူတွေကို လံကြုပ်ဇာတ်ရှုပ်တွေနဲ့ မတရားမလုပ်ကြဖို့ တားဆီးဘို့ဘဲလိုပါတယ်။ စာရှုသူအပေါင်းလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအရေခြုံများရဲ့ အဆိပ်ပေါ်သကာလိမ်းထားတဲ့ ဝါဒဖြန့်ဆောင်းပါးများကို သတိချပ်ကြဘို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ	ဖိုးထက် - စိတ်ဖြောင့်စွာ စာဖတ်ပါရစေ	သားကြီး မောင်ဇေယျ - ဥပဒေစစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ	လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်က မြန်မာရဟန်းတော်၏ Win-Win သီအိုရီ	တူမောင်ညို - သင်္ကြန်အမြောက်သံမဟုတ်မှသာ အာဏာရအုပ်စုက လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမှာပါ	အိုဘယ့် မြို့တော်	စိုးနေလင်း - ငါတို့သမိုင်း အရိုင်းမခံ	ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - ဥပဒေအရ	ဆောင်းလူ - အပြာကား	စာရေးဆရာ ဝင်းငြိမ်း ၏ “ နန်းကျဘုရင် ” ဘာသာပြန်စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများဆစ်ဒနီ - Burmese Friendship Association က မိတ်ဆုံဆည်းဆာပွဲ ကျင်းပမယ် (မေလ ၁၇ စနေနေ့)
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများက ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ စုပေါင်းလှူဒါန်းမည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ လက်ရှိအိုင်တီဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးခင်မောင်ထွန်း၏ ဌာနအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုများ
စာပဒေသာ ကောက်စာများသန်းဝင်းလှိုင် - အာကာသ စူးစမ်းမှုသမိုင်း - အပိုင်း (၃)
Cartoon Box (1,541)